Murashaxa Xisbiga WADDANI Oo Tageero Mugweyn Ka Hantiyay Degaanada Bariga Burco Ee Togdheer (SAWIRRO) - Somaliland Post
Home News Murashaxa Xisbiga WADDANI Oo Tageero Mugweyn Ka Hantiyay Degaanada Bariga Burco Ee...
Murashaxa Xisbiga WADDANI Oo Tageero Mugweyn Ka Hantiyay Degaanada Bariga Burco Ee Togdheer (SAWIRRO)
Socdaalkii Shalay Ee Degaanada Hoosyimada Gobolka Togdheer, Xamasadii Dadweynaha Iyo Xiiso Galintii Waftiga
Burco (SLpost)- Murashaxa Xisbiga WADDANI Mud. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa socdaal la xidhiidha ololaha doorashada wuxuu ku gaalabixiyay qaybo kamid ah degaanada bari ee Gobolka Togdheer, kuwaas oo siweyn looga muuneeyay tageerada WADDANI.
Wafti uu hoggaaminaayo Guddoomiyaha WADDANI ayna xubno ka yihiin, hoggaamiyaha Xisbiga Mud. Xirsi Cali Xaji Xasan, Guddoomiyaha Gobolka Togdheer ee WADDANI , xoghayayaal iyo masuuliyiin kale ayaa maalintii shalay gaadhay degaanada bari ee Gobolka Togdheer. Magalooyin Beer iyo degaanada laamigu marayo ayay waftigu ka bilabeen socdaalkooda.
Sidoo kale Waftiga Xisbiga WADDANI ee uu hoggaaminaayo Murashaxa jagada Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi waxa kamid aha goobii ay ololaha ku mareen, degaanada hoosyimada Degmooyinka Qoryaale iyo War-cimraan. Kuwaas oo dhammaantood dadweynihii ku sugnaa si xamaasadi ka muuqato ay u qaabilayeen Murashaxa iyo Waftiga WADDANI.
Xiisaha rabitaan ee isbadal iyo xamaasad xoogan ayaa laga dheehanayay dadweynihii ku sugnaa goob kasta oo uu Murashaxu istaago.
Gudaha Degamada Qoryaale ayaa kamid ahayd meelihii sida layaabka leh looga soo dhaweeyay Waftiga WADDANI. Waxaanay xubnaha waftiga oo uu Murashaxu ku lamaanyahay ay socdaal lug ah ku mareen laamiyada Magaalada Qoryaale.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) Murashaxa Madaxweyne ee Xisbiga WADDANI ayaa tageero mugweyn ka kasbaday badi degaanada Gobolka Togdheer.